Lapho isimo ngendlela akudingeki ukuqhuba ingxoxo mathupha, kodwa ngokusebenzisa chat, amantombazane amaningi elahlekile futhi abazi ukuthi yini imibuzo ungacela umfana. kubonakala kunzima Ipeni ukwakha umugqa ezithile ingxoxo kungaphezu banal "Sawubona, wena unjani". Kodwa eqinisweni, kungcono nje - okwanele nje ukuba balukhulume ambalwa nantathu amakhono bese usebenzisa ezinye izimfihlo ngokwengqondo.
Ngokushesha ezidingekayo siyavuma ukuthi ukuxhumana nale nsizwa ingase ibe orientation ezahlukene. Okokuqala, ngezinye izikhathi kuthatha ngendlela ingxoxo enobungane. Khona-ke, njengoba umthetho, asivelanga "neponyatok", okuyinto imibuzo ungacela guy ngeposi, futhi yiziphi akuzona. Isibhakabhaka kwengxoxo ngokwayo ikhuthaza nokuvuleka nokwethembeka phakathi abalingani. Enye into, uma intombazane kuyadingeka ukuze ucacise amaphoyinti athile ukuthi kungaba ebuhlungu nozakwabo wakhe inthanethi. Ngokwesibonelo, lapho afike achitha khona ngobusuku bokugcina noma ngubani blonde eside-onezinwele ezimhloshana wena wabona ephuma efulethini lakhe namhlanje ekuseni. Yiqiniso, ukuthi konke lokhu - isihloko okuyinto engcono ingamthinti, ngoba ngesinye isikhathi wonke kuyokhanya futhi kungenzeka ukuthi akukho bugebengu. Kodwa njengoba imizwa sikhungathekile ukucela, into esemqoka - ngokucophelela, ukuze ngingasebenzisi ukulimaza yena.
Beat esiphongweni - reception ezinhle ezivikela, kodwa ukukhuluma enhliziyweni akukho okuhle. Ngakho-ke, asikho isizathu, asikho isizathu aphonse ku Ozakwethu abangayilindela kuye Ukuvuma izono ngokukhululeka nangokusuka frank - kukho wokulahlekelwa. engathí enjalo ebucayi njengoba Ukuthola ulwazi oludingayo, idinga kokuzungeza ngendlela ezungezayo futhi ikhono lokuhlukanisa lapho lokho imibuzo engase ibuzwe umfana phezu ukuxhumana. Ngokwesibonelo, esimweni nge ayekubona blonde kungcono kakhulu ukubuza, kodwa bafika lapho, yini mhlawumbe, ukuvakashela izihlobo noma abangane. Nakuba, esikhathini sokugcina, uma bengeke bame ukuze bakwazi, futhi ngakho ngifuna ukukhombisa ukuthi ayasiqaphela, ungakwazi babeka indaba, qiniseka ukuthi wengeza ekugcineni into enjengokuthi: "Kodwa ngiyazi ukuthi ungenaso futhi konke lokhu kuhlakazeka izilimi okubi, akunjalo ". Basabela kanjani yesintu iyoba impendulo truest, kodwa kufanele sinake hhayi Ungenezeli emazwini akhe, okungukuthi ku-ngokushesha kangakanani futhi yena uzokutshela ukuthi ukusiphi isimo senhliziyo.
Uma une interlocutor yakho ukusondelana ngokomzwelo, i-ukukhetha isikhathi esifanele sokukhuluma akunzima. Uqinisekile ukuthi uyozizwa lapho kancane acasuke, engajabule noma ukhathele futhi umane engafuni ukuchitha lonke amabutho isikhundla senqubo yokucabanga evamile. Ngo nakancú izinkathi ezinjalo imibuzo ukubambelela okungcono. Kungenjalo, umphumela uyoba zokungazimiseli sobala ukuqhubeka nengxoxo (kakhulu) noma amanga undisguised (njengezigebengu ezimbi Isehlakalo). ezifanele Okuningi Vele uqale ekuhlaselweni ngamazwi, lapho guy ekhululekile futhi isethwe ku-positive. Qonda ukuthi nanti iphuzu ofuna, kulula - vele ubhale ambalwa imishwana kokungathathi hlangothi, futhi uma ingxoxo muhle "ethe njo", lokhu kuwuphawu lokuthi ihora X ifikile, kanye mbuzo ungabuzwa, nokuthi ukuphotha ekhanda lami.
Manje wazi kahle ukuthi imibuzo ungacela guy ngeposi futhi indlela yokwazi lokho akubhala ephendula. Nokho, kukhona eyodwa encane kodwa - zonke emhlabeni ngamunye futhi ayikwazi bawuthatha ngokungathí sina abanye bayalibala ukwenza ekuphenduleni noma cha amagama ongathanda ukufunda. Konke lokhu kungaba libe nencazelo ehluke kakhulu kunaleyo ukuthi etshaliwe.
Ukugonywa ngokumelene upokisi "Varilriks"
Yiziphi imincintiswano yezingane lokuzalwa